Nhasi ndauya kuti ndikuudze kuti zvakare ndezvakare Nhasi ndauya kuti ndikuudze kuti zvakare ndezvakare
Nhasi ndauya kuti ndikuudze kuti zvakare ndezvakare
Umwe murimi aiva nembwa yake . Saka imbwa iyi yaiita tsika yekugara paside peroad yakamirira mota. Mota yaiti ikauya yaibva yatanga kumhanyisa ichida kuibata. Mumwe muvakidzani wake akazobvunza kuti munofunga kuti imbwa yenyu ichazobata mota dzairi kumhanyisa here. Murimi ndokupindura akati " i am not concerned nekumhanyisa mota asi kuti ikazonzi yabata ichazoita sei nemota yacho.
Nyaya yandiinayo nhasi ndeye kupedza nguva pane zvinhu zvisina maturo.kurudziro yangu ndeyekuti never wastetime pane zvisina maturo. Vanhu vazhinji vakazara nekudemba mukati mehupenyu nepamusana pekumhanyisa zvisina maturo. Vamwe vanoti dai ndisina kuita chakati ndingadai ndiri parinane. Hameno kuti zvakasikwa sei kuti chinhu chisina maturo unozochiona kana kuziva kuti hachina maturo kana watopedza kuchiita nguva yapera. Vazhinji vedu hupenyu hwedu huri zvauri nhasi nekuda kwezvinhu zvisina maturo zvawai mhanyisana nazvo. Izvozvi ukatarisa vakomana vazhinji mukubhema havachabude mazviiri vamwe vasikana vakatosvika pakupihwa nhumbu chaidzo nekuti aimhanyisana nezvisina maturo .
Nhasi ndauya kuti ndikuudze kuti zvakare ndezvakare Mwari always give a second chance. wakarasikirwa nenguva yakawanda nekuda kwezvisina maturo hongu asi bable riri kuti awana Jesu akwana nezvinhu zvose kureva kuti nezvawaifunga kuti hauchafi wakazviwana watova nazvo kana waiiti hauchaitiwo muchato nekuti wakambopihwa mwana , ziva kuti ukangowana Jesu chete wakwana nezvinhu zvese, Ndoda kuti mumwe munhu aripano ashandure maonero aanoita hupenyu hwake nhasi Ndoda kuti uvene ne Hope muna Jesu. hapana chinoramba kana uchinge unaye.